Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana US » Handeha any Vegas? Kitiho ny sarontava
Vaovao Mafana • Vaovao Mafana US • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Handeha any Vegas? Misaron-tava!
Ny ankamaroan'ny fanjakan'ny tanànan'i Nevada dia miverina ao ambany mandat mask amin'ny fikasana hiaro amin'ny tranga vaovao COVID-19 miakatra manerana an'i Etazonia. Amin'ny fanjakana 16, 12 no miverina mitaky ny fanaovana sarontava.
Mankany Sin City? Mila manao sarontava ianao.
Mikasa ny hipetraka ao amin'ny casino mandritra ny ora maro ao amin'ny milina filokana na ny latabatra an-tsoroka? Mila sarontava ianao amin'ny fotoana rehetra misy anao.
Te handray anjara amin'ny buffet tsy misy farany? Azo antoka, tohizo, fa mbola mila manao saron-tava ianao eo anelanelan'ny sakafo marina.
Ny mpizaha tany dia manana fihetseham-po mifangaro amin'ny mandat ny saron-tava hiverina amin'ny heriny. Ny sasany tsy rototra mihitsy. Raha ny marina dia maro no nanapa-kevitra samirery ny hitazona ny saron-dohany tsy ho fitandremana ihany. Fa ho an'ny hafa, tsy dia faly izy ireo manoa. Indrindra ireo mpifoka. Ny fanesorana ilay sarontava dia misintona, manafosafo ary mamoaka fofonaina, atsangano indray ilay sarontava dia ho azy ireo fa tsy fahasosorana fotsiny.
Manerana ny firenena, toa maro ny mpitondra fanjakana sasatra koa, ary mifidy ny hamela ny mponina hanapa-kevitra. Manaova sarontava, aza manao sarontava, miankina amin'izy ireo izany. Raiso ohatra i Hawaii. Na dia miakatra lavitra mihoatra ny niverenan'izy ireo tamin'ny "COVID-19 heyday" aza ny isan'ny tranga vaovao, dia nilaza ny Governora fa tsy mihetsika ny hanome baiko ny fanaovana sarontava. Androany, ny mason-tsivany dia mifototra amin'ny fijerena fotsiny ny angona momba ny fanaovana vaksiny sy ny fahazoana ny tsimatimanota andiany. Miharihary izay zava-mitranga eo anelanelan'ny ankehitriny sy ny fotoana - raha tonga ny "avy eo" - dia tsy misy atahorana. Ireo mpiasan'ny fitsaboana dia mety manana taolana hoentina miaraka aminy satria feno ny marary COVID-19 isan'andro ny hopitalin'izy ireo.